အိမ်မက်စေရာ: ဧပရယ်လ် suicide
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 6:32 AM
အိမ်မက်ရေ လုပ်တဲ့အကြောင်းလေး ဖတ်သွားပါတယ်.....ဘာကြောင့်မှန်းမသိပေမဲ့...ဖြစ်နိုင်တာတွေ အမျိုးမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်......ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ဖြစ်ပြီးမှတော့ ....၀ဋ်လို့ဘဲပြောရမလားမသိဘူးနော်....ကံဆိုတာကလည်း အဆန်းသား.....ကောင်းကောင်းတစ်ယောက် မြန်မြန် သက်သာလာပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်......
ဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်လာတယ်...လူဆိုတာကလည်း ခက်သားကလား...ဘ၀ဘ၀တွေက ဘာတွေ အထုံပါခဲ့တယ်၊ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကိုယ်မှ မသိနိုင်ဘဲကိုး...ကိုယ့်ရှေ့မှာ အနှီလိုဖြစ်သွားတာ ကြုံရင်အတော် စိတ်ထိခိုက်မှာပါပဲလေ...ကိုင်း ဒီနှစ်သင်္ကြန်တော့ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသဗျား...
စကားမစပ် ဒီတစ်ခါတော့ ကွန်မန့်ပေးရတာ အဆင်ချေနေပါကလားး)
လန့်စရာပါလား? ဖတ်ရင်း ကြက်သီးထတယ်။
ပို့စ်လေးဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် အိပ်မက်ရေ.
အပေါ်က ထာဝရအိပ်စက်ခွင့်ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီး သိပ်သဘောကျလို့ အောက်ကပို့ စ်တွေဆက်ဖတ်လိုက်တာ ကောင်းကောင်းအကြောင်းဖတ်လိုက်ရတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။
သတ္တ၀ါတစ်ခု ကံတစ်ခုလို့ သာသဘောထားပြီး ကိုယ်တတ်နိုင်တာလုပ်ပေးဘို့ သာရှိတယ်လို့ နှစ်သိမ့်ပါရစေနော်။